စိတ်ကြွဆေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမှတစ်ပြိုင်တည်းထိတွေ့မှုနောက်ဆက်တွဲမူးယစ်ဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်အထီးကြွက် (2011) တွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေသည် - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
J ကို neuroscience ။ 2011 Nov 9;31(45):16473-82. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4013-11.2011.
ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆဲလ်ဇီဝဗေဒဌာန, ဆေးပညာနှင့်သွားဘက်ဆိုင်ရာ၏ Schulich ကျောင်း, အနောကျပိုငျးအွန်, လန်ဒန်တက္ကသိုလ်, အွန် N6A5C1, ကနေဒါ။
စိတ်ကြွဆေး (meth) အသုံးပြုသူများကိုကြီးထွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး, မြောက်မြားစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိခြင်းနှင့်ကြောင့် inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးဖို့အကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံစဉ်များတွင်ပါဝင်သတင်းပို့ပါ။ ဤသည်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု၏တိုးလာပျံ့နှံ့စေတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီများအတွက်အာရုံကြောအခြေခံမသိနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့အရင်က lithium chloride တို့ဖွငျ့သွေးဆောင် visceral နာမကျန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတွဲခဲ့သည့်အတွက်အထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ပါရာဒိုင်းထူထောင် (Davis က et al, 2010; ။ Frohmader et al, 2010a ။ ) ။ လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်သို့မဟုတ် meth ဆုလာဘ်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးစွာရလဒ်များကို2ခုနစ်နေ့စဉ်အုပ်ချုပ်ရေး 1 mg / kg / ကီလိုဂရမ် mg, ဒါပေမယ့်ဘဲ, meth မိတ်လိုက်စတင်ရန် latency တိုးပွားလာကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ ဒါဟာချွတ်ယွင်းနောက်ဆုံး meth အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 30 မိထငျရှားခဲ့ပေမယ့်နောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေး abstinence ၏ 1 သို့မဟုတ်7ဃပြီးနောက် dissipated ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ 1 နောက်ဆုံး meth အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ compulsive လိင်-ရှာကြံအပြုအမူ2ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ် / ကီလိုဂရမ် meth ထိတွေ့ MG ။ ဒီအကြိုးသကျရော meth အုပ်ချုပ်ရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှီခိုခဲ့တဲ့တယောက်တည်း meth လက်ခံရရှိကြောင်းလိင်ကြုံတွေ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်စောင့်ကြည့်လေ့လာမခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့အပွငျတစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ meth နှင့်အတူသို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်းအဖော်ရှာနှိုင်းယှဉ် meth အဘို့နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက်ဘို့အခွအေနမြေားရာအရပျ preference ကို (CPP က) တိုးမြှင့်။ ဆနျ့ကငျြတစ်ယောက်တည်းအဖော်ရှာဘို့ CPP ကယုတ်လျော့ခဲ့သည်။ အတူတူအဲဒီဒေတာမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများနှင့်မိတ်လိုက်အကြားအသင်းအဖွဲ့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စကားရပ်များအတွက်လိုအပ်သောစေခြင်းငှါများနှင့်တစ်ပြိုင်တည်းပါ meth ထိတွေ့မှုများနှင့်မိတ်လိုက်ရှာတိုးမြှင့်ဆုလာဘ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းကြောင်းဖော်ပြသည်။
နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) အပါအဝင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု, (၏တိုးမြှင့်ပျံ့နှံ့မှုအန္တရာယ်မကင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်အဖြစ်စှဲလမျးသူလူဦးရေအတွင်းလိင်ကျန်းမာရေး-related ရောဂါများ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အလွဲသုံးမှုများမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှု၏အသိအမြင်ကြီးပြင်းခဲ့ကြCrow နှင့်ဂျော့ခ်ျ, 1989; Peugh နှင့် Belenko, 2001; Sanchez et al ။ , 2002; raj et al ။ , 2007; Fisher က et al ။ , 2011) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများဤဆိုးကျိုးများလည်း psychostimulant စိတ်ကြွဆေး (meth) ကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ meth အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ (ကြီးထွားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ, arousal နှင့်ပျော်မွေ့သတင်းပို့ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အဓိကလှုံ့ဆျောမှုအဖြစ်ကဤအချက်များခွဲခြားသတ်မှတ်Semple et al ။ , 2002; Schilder et al ။ , 2005; အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006) ။ ထိုမှတပါး, meth အလွဲသုံးစားမှုလေ့ (လိင်အပြုအမူ၏ inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးသို့မဟုတ်လိင် compulsive အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်Halkitis et al ။ , 2001; McKirnan et al ။ , 2001; Rawson et al ။ , 2002; အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006) နှင့် HIV ပိုး၏ပျံ့နှံ့တိုးပွားလာ (Frosch et al ။ , 1996; Halkitis et al ။ , 2001; Parsons နှင့် Halkitis, 2002).
meth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတစ်ခုခန့်မှန်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်ဆန္ဒပြနေသောလူ့အစီရင်ခံစာများ meth အသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေး (များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတိုင်းတာခြင်းကင်းမဲ့ကြောင်းနာတာရှည် meth အသုံးပြုသူများထံမှ Self-အစီရင်ခံစာများအပေါ်အခြေခံပြီးနေကြတယ်Frohmader et al ။ , 2010b) ။ ထို့ကြောင့်တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. ထိန်းချုပ်စမ်းသပ် setting များကိုအောက်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက် meth-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကိုသို့အနေနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု meth နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားရှုပ်ထွေးအသင်းအဖွဲ့နားလည်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
မကြာသေးမီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်း (အထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်-ရှာအပေါ်စူးရှ meth ၏သက်ရောက်မှုဆန်းစစ်Frohmader et al ။ , 2010a) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ (အထီးကြွက်နောက်ဆက်တွဲ visceral နာမကျန်းနှင့်အတူအဖော်ရှာပေါင်းသင်းသင်ယူထားတဲ့အတွက်အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းကိုအသုံးပြုပီတာ, 1983; Agmo, 2002) ။ မိတ်လိုက်နှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုများအကြားကဒီအသင်းအဖွဲ့ထူထောင်ခဲ့သည်ပြီးတာနဲ့တိရိစ္ဆာန်များ (မိတ်လိုက်အပြုအမူအစပျိုးမဟုတ်ဘူးDavis က et al ။ , 2010; Frohmader et al ။ , 2010a) ။ တစ်ခုတည်းဆေးထိုးရက်သတ္တပတ်၏ meth pretreatment အေးစက်ဘယျလိုမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု (များ၏ဝယ်ယူနှောင့်အယှက်မပြုမီFrohmader et al ။ , 2010a) ။ ထို့ကြောင့် meth-pretreated အထီးကြွက်မိတ်လိုက်ကာဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူရှာကြံကြသည် ဟူ. ၎င်း, ဒီ maladaptive သို့မဟုတ် compulsive မိတ်လိုက်ချေါခဲ့သညျ။
အထီးကြွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏ဆိုးကျိုးများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးကာစူးရှသောမူးယစ်ဆေးဆေးထိုးခြင်းနှင့်သုတေသနများ၏သက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်ယခင်လေ့လာမှုများကန့်သတ်သည်အတိုင်း, လက်ရှိလေ့လာမှု၏အဓိကရည်မှန်းချက်အပါအဝင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ် စွမ်းဆောင်ရည်, compulsive လိင်ရှာနှင့်ဆုလာဘ်။ ပထမဦးစွာမိတ်လိုက်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏သက်ရောက်မှုမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ၏ကာလလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုအပေါ် meth ၏ရေတိုနှင့်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြားခွဲခြားရန်အပြီးစမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် maladaptive လိင်အပြုအမူအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth အုပ်ချုပ်ရေး၏သက်ရောက်မှုများအေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအကောင်အထည်ဖော်, စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်တစ်ခုကိုထပ်ခါတလဲလဲ meth ထိတွေ့မှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြားသင်ယူအသင်းအဖွဲ့များ maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် meth ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောခဲ့ကြသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) Paradigm ကဆုံးဖြတ်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတိုးမြှင့် meth များအတွက်ဆုလာဘ်နှင့် / သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်များတွင်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူအထီး Sprague Dawley ကြွက် (210-225 ဂရမ်) ချားလ်စ်မြစ် Laboratories မှရရှိသောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သန့်စင်ဘို့ PVC ပိုက်ဖဲ့င်စံ Plexiglas အိတ်များ (အိမ်မှာအိတ်များ) တွင်လိင်တူချင်းအားလုံး၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည်။ အစားအစာနှင့်မရရှိနိုင်ပါသည်ရေနှင့်: တိရစ္ဆာန်များ (12 AM 12 မှာချွတ်ထွန်း) မှောင်မိုက် / အလင်းသံသရာပြောင်းပြန်တစ် 11 / 00 ဇမှာထိန်းသိမ်းထားအခန်း၌ကျိန်းဝပ်ခဲ့ကြသည် ကြော်ငြာ libitum။ အားလုံးစမ်းသပ်အနီရောင် illumination အောက်မှာအမှောင်သံသရာစဉ်အတွင်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်။ stimulus အမျိုးသမီး (200-225 ပါ g; ချားလ်စ်မြစ် Laboratories) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်အသုံးပြုမြန်မာနိုင်ငံသ ovariectomized တို့ 5% estradiol benzoate နဲ့ 95% လက်စထရောင်တစ်ဦးအရေပြားအောက်ဆုံး implants ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Reception သွေးဆောင်ရန်, အမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပြုမီနှမ်းရေနံ (SC) 0.5 ဇ၏ 0.1 ml အတွက်အဓိကချို့ယွင်း၏4မီလီဂရမ်အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးအနောက်တိုင်းအွန်တက္ကသိုလ်မှာတိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုကော်မတီနှင့်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုအပေါ်တက္ကသိုလ်မှမီချီဂန်၏ကော်မတီကအတည်ပြုခြင်းနှင့်တိရိစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ကျန်းမာရေးအမျိုးသား Institutes အပေါ်ကနေဒါကောင်စီကဖော်ပြထားလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ရှိကြ၏ခဲ့ကြသည်။
လက်ရှိစမ်းသပ်မှုချက်ချင်းမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးအောက်ပါနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး abstinence ကာလအောက်ပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်လှုံ့ဆျောမှုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ သုံးဆယ့်သုံးလုံးအထီးကြွက် (ရီနာကှငျးအဖော်ရှာ; 60 × 45 × 50 စင်တီမီတာ) သီးခြားစမ်းသပ်မှုလှောင်အိမ်ထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ငါးခုနှစ်ကြိမ်-အပတ်စဉ်မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းစင်ကြယ်သောအိပ်ယာ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, ယောက်ျားတဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်၏ display ကိုသည်အထိသို့မဟုတ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုမဆို 1 ဇ, များအတွက်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်မိတ်လိုက် session ကိုအောက်ပါတစ်ခုမှာအပတ်ကအထီးစမ်းသပ်လုပျထုံးလုပျနညျးမှ habituated နှင့်သုံးရက်ဆက်တိုက် 1 ml / ကီလိုဂရမ်ဆားတစ်အရေပြားအောက်ဆုံးဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆေးထိုးပြီးနောက်တိရိစ္ဆာန်များ Plexiglas locomotor လှုပ်ရှားမှုအခန်းနေရာချ (40.5 × 40.5 စင်တီမီတာ; Med Associates မှ) ခံခဲ့ရသည် 16 × 16 photobeam Array ကိုတပ်ဆင်ထား; locomotor လှုပ်ရှားမှု 30 မိဘို့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကုသမှုဆေးထိုးအောက်ပါလူနာအပြုအမူမှတ်တမ်းတင်ဖို့ထို့အပြင် locomotor အခန်းအားမရယောက်ျားမိတ်လိုက်အပြုအမူများကြောင့်ကနေကွဲပြားတဲ့မူးယစ်ဆက်စပ်ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ယောက်ျား 1 သို့မဟုတ်2၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးမီလီဂရမ် / ml / kg meth သို့မဟုတ်မော်တော်ယာဉ် (ဆား, 1 ml / ကီလိုဂရမ်ကိုလက်ခံရရှိ; n 11 ရက်ဆက်တိုက် =7တစ်ခုချင်းစီ) ။ တစ်ခုချင်းစီကိုဆေးထိုးပြီးနောက်အထီး locomotor လှုပ်ရှားမှုအခန်းများ၌ထားကြ၏နှင့် locomotor လှုပ်ရှားမှုသူတို့ကျင်းပနိုင်ရန်လှောင်အိမ်မှပြန်ပေးသောပြီးနောက်, 30 မိဘို့မှတ်တမ်းတင်ဖေါ်ပြခဲ့ပါတယ်။ meth အုပ်ချုပ်ရေး၏နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွင်, အထီး 30 မိပြီးနောက် locomotor လှုပ်ရှားမှုအခန်းထဲကနေဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် meth ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဘို့စမ်းသပ်ဖို့မိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်တင်လိုက်တယ်။ တိရစ္ဆာန်များမူးယစ်ဆေး abstinence ၏ 1 ဃသို့မဟုတ် 1 ရက်သတ္တပတ်အောက်ပါမိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်နောက်တဖန်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
မိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်စံသတ်မှတ်ချက်ဘောင် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ညွှန်ပြနေသော, mount မှ latency (ပထမ mount မှအမျိုးသမီးများ၏နိဒါန်းကနေအချိန်) နှင့် intromission (ပထမ intromission မှအမျိုးသမီးများ၏နိဒါန်းကနေအချိန်) အပါအဝင်စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်Hull et al ။ , 2002), အဖြစ်သုတ်ရည်လွှတ်မှအောင်းနေချိန်ပထမဆုံး intromission ကနေသုတ်ရည်လွှတ်မှ (အချိန်), လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို၏အစီအမံနေသောသုတ်ရည်လွှတ်မတိုင်မီတောင်ပေါ်နှင့် intromissions ၏နံပါတ်များ, နှင့် postejaculatory ကြားကာလ, (Hull et al ။ , 2002; Pfaus, 2009) ။ အုပ်စုများအကြားခြားနားချက်များ nonparametric Kruskal-Wallis ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့် Dunn ရဲ့သုံးပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုချင်းစီကို parameter သည်အဘို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည် post ကို hoc 0.05 ၏အရေးပါမှုကိုအဆင့်ဆင့်မှာနှိုင်းယှဉ်။
Meth ဆေးတစ်ခုချင်းစီမှအောက်ပါ Locomotor လုပ်ဆောင်မှုကိုအကွာအဝေး ၅ မိနစ်အတွင်းခရီးသွားသည့်အခါ Med Associates ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုသုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုကွဲပြားခြားနားမှုကို nonparametric Kruskal – Wallis analysis နှင့် Dunn's ကို အသုံးပြု၍ ဆန်းစစ်ခဲ့သည် post ကို hoc နှိုင်းယှဉ်။ meth-သွေးဆောင် locomotor ာင်းဆနျးစစျဖို့, စမ်းသပ်မှု၏နောက်ဆုံး 10 မိစဉ်အတွင်း meth-သွေးဆောင်လှုပ်ရှားမှုအတူတွဲထားသောသုံးပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်ဆေးထိုးကုသမှုအုပ်စုတစ်စုအတွင်းပထမဦးဆုံးနှင့်သတ္တမဆေးထိုးတစ်နေ့တာအကြားနှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် t စမ်းသပ်မှုများ။ 0.05 ၏အရေးပါမှုအဆင့်ကိုအားလုံးနှိုင်းယှဉ်ဖို့လျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ 50 အထီးကြွက်သုံးရက်ဆက်တိုက်ဆားဆေးထိုးဖို့ habituated နှင့်ယောက်ျားပေါင်းသုံးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြတစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session ကိုမပြုမီ, 1 / / ကီလိုဂရမ် meth သို့မဟုတ် 1 ml ကို mg ကီလိုဂရမ်မိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်ထားရှိဆား (SC), နှင့်, 30 မိအကြာတွင်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် 1 ဇသည်အထိတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်ဖြစ်စေ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် parameters (အထကျ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုကြည့်ပါ) မှတျတမျးတငျထားနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ နှစ်ပတ်အကြာတွင်တိရိစ္ဆာန်များတစ်အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။ အထီး pretreatment (meth သို့မဟုတ်ဆား) နှင့်အေးစက်အဆိုအရလေးစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ခွဲခြား [lithium chloride တို့ (LiCl) -paired သို့မဟုတ် -unpaired] ကြသည် ဟူ. ၎င်း, အုပ်စုများ (ဆား-unpaired ခဲ့ကြသည်n = 12), meth-unpaired (n = 12), ဆား-တွဲ (n = 13), နှင့် meth-တွဲ (n = 13) ။ အဆိုပါအေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းရှစ်နှစ်ဆက်တိုက်2ဃအေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေပါဝင်သည်။ ပဌမနေ့စဉ်အတွင်းအားလုံးယောက်ျားတစ်ဦးလက်ခံအမျိုးသမီးမိတ်ဆက်ခဲ့သည့်အပြီး, တစ်ဦး 10 မိလေ့ကာလများအတွက်မိတ်လိုက်နယ်ပယ်တွင်၌ထားကြ၏။ olfactory တွေကိုအထီးချဉ်းကပ်အပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ရန်နှင့်အေးစက်ခိုင်မာစေရန်ပြသပြီအဖြစ်အမျိုးသမီး (မိတ်လိုက်ရှေ့တော်၌ထိုအမြီး၏လည်ပင်းနှင့်အခြေစိုက်စခန်းအပေါ်ဗာဒံသီး, ဆီ swabbing အားဖြင့်ဆှတျဖနျြးခဲ့ကြလောရင့်ခြင်းနှင့် Kiefer, 1987; Agmo, 2002) ။ အထီး 30 မိဘို့သို့မဟုတ်တဦးတည်းသုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ intromissions ပထမဦးဆုံး 15 မိအတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်မပြုခဲ့ပါလျှင်, မိတ်လိုက်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ်ရုံးတင်စစ်ဆေးရပ်စဲအောက်ပါတစ်မိနစ်, ယောက်ျားတစ်ဦး 127.2 / 10 ml / ကီလိုဂရမ် LiCl (တွဲအထီး) သို့မဟုတ်ဆား (unpaired ယောက်ျား) ၏ကီလိုဂရမ် intraperitoneal ဆေးထိုး MG ပေးထားခဲ့ကြသည်။ LiCl သို့မဟုတ်ဆားမသက်ဆိုင်မိတ်လိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိမရှိ၏အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသည်။ တွဲအထီးဆားကိုလက်ခံရရှိချိန်တွင်အောက်ပါနေ့, unpaired အထီး LiCl တစ် 10 ml / ကီလိုဂရမ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များထိုးပြီးနောက်အိမ်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်။
conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အပေါ် meth pretreatment ၏သက်ရောက်မှုတစ်ဦးတည်း meth ဖို့တစ်ပြိုင်နက် meth မှထိတွေ့မှုများနှင့်မိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကြောင့်အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုကောက်ယူခဲ့သည်။ အထီးကြွက် (n = 20) ငါးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းပေမယ် meth သို့မဟုတ်ဆားကုသမှု (မပါဘဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကလက်ခံရရှိn = 10 တစ်ခုချင်းစီ) ။ အဲဒီအစား, 1 ရက်သတ္တပတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအပြီး, သူတို့က meth (1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, SC) ဖြစ်စေ၏ခုနစ်ခုတခါ-နေ့စဉ်ဆေးထိုးလက်ခံရရှိသို့မဟုတ်ဆားနှင့်2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် (အထကျ, စမ်းသပ်မှု 1 ကြည့်ပါ) အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်။
နှစ်ဦးစလုံးစမ်းသပ်ချက်အဘို့နှင့်တစ်ဦးချင်းစီအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် parameters တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယောက်အုပ်စုတွင်ခြားနားချက်များတစ်ဦးနှစ်ဦး-လမ်း ANOVA (အချက်များ: meth / ဆား pretreatment, အေးစက်) ကို အသုံးပြု. တစ်ဦးချင်းစီအေးစက်စမ်းဘို့ဆုံးဖြတ်ပေးခဲ့သည်။ Pearson χ2 ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတစ်ခုချင်းစီကိုအေးစက်လမ်းကြောင်းအတွင်းတောင်ပေါ်ပြသကြောင်းယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်အုပ်စုများ intromissions, ဒါမှမဟုတ်သုတ်ရည်လွှတ်အကြားခြားနားချက်များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
Meth မှကြိုတင်ကုသမှုသည် Meth အတွက်အကျိုးကျေးဇူးသို့မဟုတ်လိင်အပြုအမူအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် CPP စမ်းသပ်မှုများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သိသာထင်ရှားသောအမြင်အာရုံနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောပစ္စည်းများနှင့်ဗဟိုအခန်းငယ် (၁၃ × ၁၂ × ၂၁ စင်တီမီတာ) ခွဲခြားထားသည့်အခန်း ၃ ခန်းပါကြီးမားသောအပြင်ဘက်ခန်း (၂၈ × ၂၂ × ၂၁ စင်တီမီတာ) ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာကို CPP စမ်းသပ်မှုအားလုံးအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ။ ဗဟိုအခန်း၏နှစ်ဖက်စလုံးမှတံခါးများသည်အခန်းများကိုခွဲထားပြီးတိရစ္ဆာန်များကိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားခွင့်ပြုရန်မြှင့်တင်နိုင်သည်။ အခန်းတိုင်းတွင်ရှိသောအချိန်ကိုတိုင်းတာရန်ယန္တရားသည် photobeams တပ်ဆင်ထားသည်။ ပထမနေ့တွင်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်စီ၏ကန ဦး အခန်းကို ဦး စားပေးရွေးချယ်မှုအားဆုံးဖြတ်ရန် ၁၅ မိနစ်အကြိုစစ်ဆေးမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၊ တိရစ္ဆာန်တစ်ခုစီအား CPP ယန္တရား၏အခန်းများအကြားလွတ်လပ်စွာလှည့်လည်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ တစ်ခုခုကိုအခန်းထဲကအဘို့အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာ ဦး စားပေးစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ တိကျတဲ့အခန်းတစ်ခုအတွက်ပိုမိုကြာမြင့်တဲ့ ဦး စားပေးမှုကိုပြသမယ်ဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေကိုလေ့လာမှုကနေဖယ်ထုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ အေးစက်နေစဉ်အတွင်းကန ဦး ကြိုတင်မမျှော်လင့်သောအခန်း (တွဲစပ်ထားသောအခန်း) ကိုမိနစ် ၃၀ ကြာကြိုးကိုင်ခြယ်လှယ်ခြင်းဖြင့်တွဲဖက်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကန ဦး ဦး စားပေးသောအခန်း (တွဲဖက်မှုမရှိသောအခန်း) သည်ထိန်းချုပ်မှုခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်တွဲဖက်ခဲ့သည်။ စမ်းသပ်ထားသောအုပ်စုတစ်ခုချင်းစီတွင်တိရိစ္ဆာန်များနှင့် တွဲဖက်၍ မရသောအခန်းများနှင့်ထိတွေ့မှုရှိခြင်းကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းထားနိုင်ခဲ့သည်။ အသွင်သဏ္identicalာန်တူဟန်တူသည့် posttest ကိုစတုတ္ထနှင့်နောက်ဆုံးနေ့၌ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ပထမဦးစွာ 50 အထီးကြွက်သုံးရက်ဆက်တိုက်ဆားဆေးထိုးဖို့ habituated နှင့်ယောက်ျားပေါင်းသုံးမိတ်လိုက်အစည်းအဝေးများကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုမိတ်လိုက် session တစ်ခုအတွင်းမှာတော့, အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် 1 စမ်းသပ်လှောင်အိမ်ထဲတွင်နေရာ / ကီလိုဂရမ် meth သို့မဟုတ် 1 ml / ကီလိုဂရမ်ဆား (SC), mg နှင့်, 30 မိအကြာတွင်သုတ်ရည်လွှတ်သို့မဟုတ် 1 ဇသည်အထိတစ်လက်ခံအမျိုးသမီးနှင့်အတူမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စေနဲ့အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် parameters (အထကျ, ဖော်ပြချက်အဘို့, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုကြည့်ပါ) မှတျတမျးတငျထားနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာမှာတော့တိရိစ္ဆာန်များကိုမူးယစ်ဆေးကုသမှုနှင့် CPP က testing အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အဘို့အလိုက်ဖက်လေးစမ်းသပ်အုပ်စုများသို့ဖြန့်ဝေခဲ့ကြသည်။ အေးစက်စဉ်အတွင်းအထီး meth သို့မဟုတ်ဆား (ကြိုတင်မူးယစ်ဆေးကုသမှုကိုက်ညီ) နှင့် 30 မိဖြစ်စေနဲ့အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြအကြာတွင်သုတ်ရည်လွှတ်သည်အထိမိတ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ သုတ်ရည်လွှတ်အောက်ပါတစ်မိနစ်, တိရစ္ဆာန်တို့သည်တွဲခနျးထဲသို့ချထားခဲ့သည်။ အဆိုပါ unpaired အခန်းထဲကတစ်ဦးဆေးထိုးခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးဆေးထိုး (meth သို့မဟုတ်ဆား) သို့မဟုတ်မိတ်လိုက်ဖြစ်စေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ နှင့် CPP ကရမှတ် (စမ်းသပ်မှု 100 ၏ posttest တစ် preference ကိုရမှတ် (1 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲအချိန်အဖြစ်တွက်ချက်သည့် pretest နှင့် posttest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်ရာခိုင်နှုန်း); အောက်ပါခြားနားချက်အတွက် အဆိုပါ posttest အနုတ်အဆိုပါ pretest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်) တစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ preference ရမှတ်အတူတွဲထားသောသုံးပြီးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွင်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများနှင့် CPP ရမှတ်များကိုတစ်ဖက်အနေဖြင့် ANOVA နှင့် Fisher ၏အနည်းဆုံးခြားနားမှုစမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြု၍ စမ်းသပ်သည့်အုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည် post ကို hoc အားလုံး 95% ယုံကြည်မှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်။
meth များအတွက်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ် meth pretreatment ၏သက်ရောက်မှုသို့မဟုတ်မိတ်လိုက်တစ်ဦးတည်း meth ဖို့တစ်ပြိုင်နက် meth မှထိတွေ့မှုများနှင့်မိတ်လိုက်သို့မဟုတ်ကြောင့်အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြခြင်းရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့တစ်ဦးအပိုဆောင်းစမ်းသပ်မှုကောက်ယူခဲ့သည်။ အထီးကြွက် (meth (1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ကိုလက်ခံရရှိခြင်းနှင့်4ရက်ဆက်တိုက်တစ်ပြိုင်နက်အဖော်ရှာn = 10) ။ နှစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုများ (လိင်နုံကျန်ရစ်နှင့် meth သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေလက်ခံရရှိn = 10 တစ်ခုချင်းစီ) ။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင် meth များအတွက် CPP ကကောက်ယူခဲ့သည်။ အားလုံးအထီးတွဲအခန်း meth တစ်ဦးဆေးထိုးလက်ခံရရှိပြီးဆားဆေးထိုးသည့် unpaired အခန်းထဲကနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ preference ရမှတ်အတူတွဲထားသောသုံးပြီးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွင်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t 0.05 ၏အရေးပါမှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု။
စမ်းသပ်မှု3။
တပြိုင်နက်တည်း meth မှထိတွေ့မှုများနှင့်မိတ်လိုက်ပြောင်းလဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသည်အရေးပါရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့တစ်မိတ်လိုက် CPP ကလေ့လာမှုကောက်ယူခဲ့သည်။ အထီးကြွက် (လေးရက်ဆက်တိုက်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်း meth (1 mg / kg) သို့မဟုတ်ဆားဖြစ်စေလက်ခံရရှိn = 10 တစ်ခုချင်းစီ) ။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက် CPP ကစမ်းသပ်ပြီးခဲ့သည်။ အားလုံးအထီးတွဲအခန်းထဲကအောက်ပါမိတ်လိုက်၌ထားကြ၏နှင့်မျှမတို့မိတ်လိုက်သည့် unpaired အခန်းထဲကနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ preference ရမှတ်အတူတွဲထားသောသုံးပြီးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွင်းတွက်ချက်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t 0.05 ၏အရေးပါမှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု။
meth ထိတွေ့နေတဲ့ conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) စမ်းသပ်မှုကောက်ယူခဲ့ LiCl-သွေးဆောင်ဖျားနာခြင်းမှ sensitivity ကိုပွောငျးလဲရှိမရှိစမ်းသပ်ရန်။ တကြ် CPA စမ်းသပ်ခြင်း (အထကျ, အခြေအနေများအရပျကို preference ကိုကြည့်ပါ) ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုကြောင်းကဲ့သို့တူညီသောယန္တရားကို အသုံးပြု. မှောင်မိုက်ကာလ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သုံးရက်ဆက်တိုက်အဘို့, အထီးကြွက် meth (1 / ကီလိုဂရမ် mg) သို့မဟုတ်ဆား (နဲ့အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့n = 10 တစ်ခုချင်းစီ) ။ တစုံတယောက်ကိုရက်သတ္တပတ်အကြာမှာတော့အားလုံးယောက်ျားဆားတစ်ဦးနှင့်ညီမျှထိုးသည့်ကနဦး unpreferred အခန်းထဲကနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်စဉ်အခါ, စပိုင်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်အခန်းထဲကနှင့်အတူတွဲကာ LiCl ဆေးထိုး (10 ml / ကီလိုဂရမ်, ip) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ posttest ပြီးနောက် preference ကိုရမှတ် (အချိန်ရာခိုင်နှုန်းသည် pretest နှင့် posttest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲ; 100 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲအချိန်အဖြစ်တွက်ချက်) ဆိုလိုခြင်းနှင့်တကြ် CPA ရမှတ် (များတွင်သုံးစွဲအချိန်အတွက်ခြားနားချက် အဆိုပါ posttest အနုတ်အဆိုပါ pretest) စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းထဲကတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်များအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ preference ရမှတ်အတူတွဲထားသောသုံးပြီးစမ်းသပ်အုပ်စုများအတွင်းနှိုင်းယှဉ်ခဲ့ကြသည် t စမ်းသပ်မှုများ, တကြ် CPA ရမှတ် unpaired သုံးပြီးစမ်းသပ်အုပ်စုများအကြားနှိုင်းယှဉ်စဉ်တွင် t အားလုံး 0.05 ၏အရေးပါမှုအဆင့်စမ်းသပ်မှု။
မိတ်လိုက်ပြီးခဲ့သည့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးအောက်ပါ 30 မိစမ်းသပ်ပြီးသောအခါ meth သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဒီအကြိုးသကျရော2မှာထိုး-မှီခိုခဲ့ / ကီလိုဂရမ် mg, ဒါပေမယ့်မရ 1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်, meth ။ meth သိသိသာသာ (တောင်ပေါ်မှာများနှင့် intromission latency တိုးလာp ဆားထိန်းချုပ်မှု (နှင့်နှိုင်းယှဉ်အသီးသီး = 0.001 နှင့် 0.002,)သဖန်းသီး။ 1A) ။ meth အပြုအမူအစပျိုးကြောင့်ယောက်ျားများ၏ရာခိုင်နှုန်းအကျိုးသက်ရောက်စေအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, သုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက် mated ယောက်ျား၏ 100% ခဲ့ပါဘူး။ မိတ်လိုက်မူးယစ်ဆေး abstinence ရက်ပေါင်း 1 နှင့်7စဉ်အတွင်းစမ်းသပ်ပြီးသောအခါ meth-pretreated အထီးဆား-pretreated ထိန်းချုပ်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပြောင်းလဲမိတ်လိုက်အပြုအမူမပြခဲ့ပါဘူးအဖြစ် meth (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများစတင်ပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါသဖန်းသီး။ 1B,C) ။ latency မသက်ရောက်မှုသုတ်ရည်လွှတ်မှရှိခဲ့သည်အဖြစ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ meth (မည်သည့်အချိန်တွင်မလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုထိခိုက်စေခဲ့ပါဘူးသဖန်းသီး။ 1) သို့မဟုတ်တောင်ပေါ်နှင့် intromissions ၏နံပါတ်များကို (Data ပြမပါ) ။ ထို့ကြောင့်မကြာမီအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်စမ်းသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်လိုက်၏ meth ချို့ယွင်းစတင်ထပ်ခါတလဲလဲပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏ဆိုးကျိုးများ။ A-C ကို0, 1, ဒါမှမဟုတ်2၏, latency mount မှ (ML), intromission (IL), နှင့်သုတ်ရည်လွှတ် (EL) အောက်ပါအုပ်ချုပ်ရေးသတ္တမနှင့်နောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးပြီးနောက် / ကီလိုဂရမ် meth 30 မိ Mg (A) နှင့်မူးယစ်ဆေး abstinence ရက်ပေါင်း 1 (B) နှင့်7(C) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ ဆား-ထိုးသွင်းယောက်ျားထံမှ * သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p <0.05) ။
1 သို့မဟုတ်2ဖြစ်စေမှာ meth မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်ဆေးများ (ထိန်းချုပ်မှုနဲ့နှိုင်းယှဉ် locomotor လှုပ်ရှားမှုတိုးလာp <0.001, 1 နှင့်2မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်; သဖန်းသီး။ 2A,B) ။ ထပ်ခါတစ်လဲလဲ meth အုပ်ချုပ်ရေး 1 / ကီလိုဂရမ် meth (ပထမဆေးထိုးနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးအောက်ပါတစ်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ် locomotor လှုပ်ရှားမှုပြသ MG အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ထိခိုက် locomotor တုံ့ပြန်မှု-ယောက်ျားအတွက်ရလဒ်p = 0.042; သဖန်းသီး။ 2C) ။ ဆနျ့ကငျြ,2မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth သိသိသာသာအတွက်ရလဒ် (ပဌမနေ့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးနေ့၌ locomotor လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားp = 0.009; သဖန်းသီး။ 2C), အရာကျပုံစံအပြုအမူတွေအတွက်တိုး၏ညွှန်ပြပါလိမ့်မယ်။
locomotor လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏ဆိုးကျိုးများ။ A, B, အထီးများကခရီးထွက်အဝေးသင်ပထမဦးဆုံးအောက်ပါ 0, 1, ဒါမှမဟုတ်2မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth အုပ်ချုပ်ခွင့် (A) နှင့်နောက်ဆုံး (B) meth ဆေးထိုး။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ အားလုံးကုသမှုအုပ်စုများအတွက်ထိန်းချုပ်မှုကနေ * သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p <0.05); #1 အကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (/ ကီလိုဂရမ် meth mg သာထိန်းချုပ်ဖို့p <0.05) ။ C, meth-သွေးဆောင် sensitized locomotor တုံ့ပြန်မှု။ 0, 1, ဒါမှမဟုတ်2အုပ်ချုပ်ယောက်ျားအားဖြင့်ခရီးထွက်အဝေးသင် locomotor လှုပ်ရှားမှုအသံသွင်း၏နောက်ဆုံး 10 မိစဉ်အတွင်းပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံး meth ဆေးထိုးအောက်ပါ / ကီလိုဂရမ် meth MG ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ တူညီသောကုသမှုအုပ်စုတစ်စု၏လိင်နုံယောက်ျားထံမှ * သိသိသာသာခြားနားချက် (p <0.05) ။
စမ်းသပ်မှု 1 ၏ meth pretreatment အဆင့်စဉ်အတွင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ဆား-pretreated ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်သုံးယောက်နောက်ဆက်တွဲအစည်းအဝေးများတစ်ခုချင်းစီစဉ်အတွင်း 1 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ် meth ကုသမှုအားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့စားပွဲတင် 1) ။ ဤရလဒ်သည်အတူတူပင်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အုပ်ချုပ်လျှင်ပင်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် meth ၏ဤဆေးထိုး၏သက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအတည်ပြုပါ။ ထိုမှတပါး, meth pretreatment LiCl တွဲဖက်မှုမပြုမီ (ထိုအေးစက်ပါရာဒိုင်း၏ပထမဆုံးနေ့ကနေစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပြောင်းလဲပစ်ဘဲ, စားပွဲတင် 1) သို့မဟုတ် LiCl-unpaired အုပ်စုများအတွက်အေးစက်စမ်းသပ်မှုတွေမဆိုကာလအတွင်း။ ဤရလဒ်သည် meth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါကြောင်းအတည်ပြုပါ။
ဆနျ့ကငျြ, ထပ်ခါတလဲလဲ meth ကုသမှု compulsive လိင်ရှာမြှင့်တင်ရန်ပြုလေ၏။ ထိန်းချုပ်မှုခုနှစ်, ဆား-pretreated တိရစ္ဆာန်များ, အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ inhibited ။ အထူးသ, (unpaired ဆား-pretreated ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါတပ်ဆင်ထားခြင်းနှင့် intromitted ကြောင်း LiCl-တွဲယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းဆဌမပေါ်တွင်ပထမဆုံးထင်ရှားခဲ့ကြသည်လျော့နည်းသွားp = 0.039) အေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေး7မှတစ်ဆင့်တည်မြဲမှု (p = 0.005; မပြသဒေတာ) နှင့် 8 (p <0.001; သဖန်းသီး။ 3B) ။ ejaculated ကြောင့်ယောက်ျားများ၏ရာခိုင်နှုန်းအတွက်တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်စတုတ္ထပေါ်တွင်ပထမဆုံးထင်ရှားခဲ့သည် (p = 0.041) အေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အေးစက်တစ်လျှောက်လုံးတည်မြဲမှု (p <0.001; သဖန်းသီး။ 3C) ။ သို့သော် meth pretreatment LiCl နှင့်အတူတွဲ meth-pretreated အထီး unpaired meth-pretreated ယောက်ျားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကနောက်ဆုံးအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးသည်အထိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏သိသာထင်ရှားသောတားစီးမရောက်နိုင်ဘူးအဖြစ်အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အကျိုးသက်ရောက်စေခဲ့တယျ။ အထူးသ intromissions နှင့်သုတ်ရည်လွှတ်ပြသ meth-pretreated LiCl-တွဲယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းသိသိသာသာအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေး 8 ကာလအတွင်းသာလျော့နည်းသွားခဲ့ကြသည် (p = 0.03 နှင့် p အသီးသီး = 0.011,) ။ ထို့ကြောင့်အေးစက်စတင်ခြင်းမပြုမီ meth pretreatment2ရက်သတ္တပတ် maladaptive သို့မဟုတ် compulsive လိင်-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ရလဒ်။
conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (စမ်းသပ်မှု 1) ရက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါမိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ A, စမ်းသပ်အုပ်စုများ saline- (Sal) သို့မဟုတ် (တွဲအထီး) နှင့် saline- သို့မဟုတ် (Unpaired အထီး) အဖော်ရှာအောက်ပါဆားကိုလက်ခံရရှိကြောင်း meth-pretreated ယောက်ျားအဖော်ရှာအောက်ပါ LiCl လက်ခံရရှိကြောင်း meth-pretreated အထီးပါဝင်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေး၏ဒုတိယနေ့စဉ်အတွင်းတွဲအထီးဆားနှင့် unpaired အထီး LiCl လက်ခံရရှိကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ B, C, အထီးရာခိုင်နှုန်း (mountingB) နှင့် ejaculating (C) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအုပ်ချုပ် meth pretreatment အောက်ပါ conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကာလအတွင်း။ ဆား-pretreated unpaired ယောက်ျားထံမှ * သိသိသာသာခြားနားချက် (p <0.05); #meth-pretreated unpaired ယောက်ျားကနေသိသိသာသာခြားနားချက် (p <0.05) ။
conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အပေါ် meth pretreatment ၏သက်ရောက်မှုတွင်တစ်ပြိုင်တည်း meth နှင့်မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုခဲ့ကြသည်။ အထူးသအေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောအဆ (nonconcurrent) မှာ meth pretreatment နှင့်မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြောင်းလိင်ကြုံတွေ့ယောက်ျားအတွက်မထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ တောင်ပေါ်နှင့်သုက်ဆား-pretreated တွဲအထီး (ထံမှကွဲပြားခြားနားသောမပြသကြောင်း meth-pretreated LiCl-တွဲယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်းသဖန်းသီး။ 4) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာ meth နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံအကြားကနဦးအသင်းအဖွဲ့ compulsive လိင်အပြုအမူအပေါ် meth ၏သက်ရောက်မှုတစ်ခုပံ့ပိုးအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက် (စမ်းသပ်မှု 2) ရက်နေ့တွင် nonconcurrent မိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ mounting ယောက်ျား၏ရာခိုင်နှုန်း (A) နှင့် ejaculating (B) LiCl ကာလအတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံနဲ့ဆက်စပ်မရ meth pretreatment အောက်ပါလိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်။ အုပ်စုနှစ်စုပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်: LiCl-တွဲဆားနှင့်အတူ pretreated နှင့် LiCl-တွဲ meth နှင့်အတူ pretreated ။
အပိုဆောင်းထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်ချက်အားလုံးယောက်ျား LiCl ၏တစ်ခုတည်းထိုးနှင့်ဆက်စပ်အခနျးတခုခြင်းကိုမနှစ်သက်ဖွဲ့စည်းခဲ့အဖြစ် meth pretreatment အောက်ပါမိတ်လိုက်တားစီးဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, LiCl-သွေးဆောင် visceral နာမကျန်းတစ်တုံး sensitivity ကိုကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ အထူးသ saline- နှင့် meth-pretreated နှစ်ဦးစလုံးအထီးကို (pretest နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါပု posttest စဉ်အတွင်း LiCl-တွဲအခန်းသိသိသာသာလျော့နည်းအချိန်ကုန်p အသီးသီး = 0.037 နှင့် 0.045, သဖန်းသီး။ 5A) ။ ထိုမှတပါး, pretest နှိုင်းယှဉ်အဆိုပါ posttest အောက်ပါ LiCl-တွဲအခန်းသုံးစွဲအချိန်ခြားနားချက် (Meth- နှင့်ဆား-pretreated အုပ်စုများအတွက်တူညီခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 5B).
LiCl-သွေးဆောင်တကြ် CPA အပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းပါမိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ A, B, 100 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲ Preference ရမှတ် (အချိန်လည်းရှိ၏ A) နှင့်တကြ် CPA ရမှတ် (အချိန်အတွက်ကွာခြားချက် posttest အနုတ် pretest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းသုံးစွဲ; B) ဆား (Sal နှင့်အတူ pretreated mated ယောက်ျားအတွက်, လိင် + ဆား) သို့မဟုတ် meth (လိင် + meth) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ အတူတူစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်း pretest ထံမှ * သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p <0.05) ။
self-အစီရင်ခံစာလေ့လာမှုများ (meth အသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်အဓိကလှုံ့ဆျောမှုကြောင်းထုတ်ဖေါ်Semple et al ။ , 2002; Schilder et al ။ , 2005; အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါး၏ဤ meth-သွေးဆောင်တိုးမြှင့်သည့်ကြွက်မော်ဒယ်အတွက်စမ်းသပ်ပြီးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့်, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီပါရာဒိုင်း meth နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမိတ်လိုက်သို့မဟုတ်တစ်ဦးတည်း meth အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်စေထက်ပိုပြီးကြိုးရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ ယခင်လေ့လာမှုများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာAgmo နှင့် Berenfeld, 1990; Pfaus နှင့် Phillips က, 1991; Tenk et al ။ , 2009), ဆား-pretreated ထိန်းချုပ်မှုယောက်ျားအတွက်အဖော်ရှာ CPP က-ယောက်ျားအတွက်ရလဒ် (အ posttest စဉ်အတွင်းဆား-တွဲအခန်းထဲကထက်လိင် + ဆား-တွဲအခန်းအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲp = 0.001; သဖန်းသီး။ 6C,D) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ထိန်းချုပ်မှုအထီး (မိတ်လိုက်ရှေ့တော်၌ဆားဆေးထိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်မထိခိုက်ခဲ့ပါကြောင်းသရုပ်ပြခြင်း, လိင်-တွဲအခန်းထဲကကျော်လိင် + ဆား-တွဲအခန်းထဲကများအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်မပြုခဲ့သဖန်းသီး။ 6C,D) ။ ရလဒ်များ meth မိတ်လိုက်သို့မဟုတ် meth တစ်ဦးတည်းဖြစ်စေနဲ့နှိုင်းယှဉ်လိင်များအတွက် CPP ကတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ယောက်ျားလိင် + လိင်-တွဲအခန်းထဲက (ထက် meth-တွဲအခန်း posttest ကာလအတွင်းအချိန်ပိုမိုသုံးစွဲp <0.001; သဖန်းသီး။ 6C) သို့မဟုတ် meth-တွဲအခန်းထဲက (p = 0.02; သဖန်းသီး။ 6C), သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ (p အသီးသီး = 0.002 နှင့် 0.05, သဖန်းသီး။ 6D) ။ ထို့ကြောင့်, meth နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ပြိုင်တည်းပါတစ်ပြိုင်နက်တည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့် meth နှင့်အတူ pretreated ခဲ့တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တစ်ဦးတည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူသို့မဟုတ် meth ထက်ပိုပြီးကြိုးဖြစ်ပေါ်လာသည်။
mating- နှင့် meth-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (စမ်းသပ်မှု 1) ရက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါမိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ လေးအုပ်စုများပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်။ Aလိင် + ဆား / လိင်, လိင် + ဆား / ဆား: နှစ်ဦးအုပ်စုများလိင် + ဆား (Sal) pretreatment နှင့်တွဲ / unpaired အခန်းအောက်ပါကုသမှုကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ဆားလိင်များအတွက် CPP ကပြောင်းလဲပစ်ရန်မျှော်လင့်မခံခဲ့ရအဖြစ်ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, တစ်အနုတ်လက္ခဏာထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ လိင် CPP ကဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်အဖြစ်ဒုတိယအုပ်စုတစ်စု, တစ်ဦးအပြုသဘောထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ B, အခြားအုပ်စုနှစ်စုလိင် + meth pretreatment လက်ခံရရှိနှင့်အဆိုပါတွဲ / unpaired အခန်းအောက်ပါ: လိင် + meth / လိင်သို့မဟုတ်လိင် + meth / meth ။ တိရစ္ဆာန်တို့သည်တွဲနှင့် unpaired အခန်းများနှင့်ထိတွေ့ခဲ့ကြသည့်အတွက်အဆိုပါအမိန့်အသီးအသီးစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်း counterbalanced ခဲ့သည်။ C, ဦးစားပေးရမှတ် (100 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲအချိန်) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ အတူတူစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်း pretest ထံမှ * သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p <0.05) ။ D, CPP ကရမှတ် (ထို posttest အနုတ်အဆိုပါ pretest စဉ်အတွင်းတွဲအခန်းကုန်သောကာလ၌ခြားနားချက်) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ လိင် + ဆား / လိင်အုပ်စုတစ်စုကနေ * သိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှု (p <0.05) ။
ထို့နောက်သူက meth နှင့်လိင်၏တစ်ပြိုင်တည်းပါ pretreatment အဆိုပါ unpaired အခန်းဆားကုသမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တစ်ဦးတည်း meth များအတွက် CPP ကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိမရှိဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါးဆေးထိုးနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်း mated ကြောင်း meth-pretreated အထီးကို (meth-တွဲအခန်းထဲကများအတွက် preference ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်p = 0.01; သဖန်းသီး။ 7) ။ ဆနျ့ကငျြ, မိတ်လိုက်၏ဆက်စပ်ခြင်းမရှိဘဲထပ်ခါတလဲလဲဆားသို့မဟုတ် meth ထိုးခံသောအထီးရှိ posttest စဉ်အတွင်း meth-တွဲအခန်းထဲကများအတွက်တိုးချဲ့ preference ကိုမပြခဲ့ပါဘူး။
meth-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (စမ်းသပ်မှု 2) ရက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါမိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ ဆား (Sal), meth, ဒါမှမဟုတ်လိင် + meth နှင့်အတူ pretreated ယောက်ျားအတွက် preference ရမှတ် (အချိန် 100 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲ) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။ အတူတူစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုအတွင်း pretest ထံမှ * သိသိသာသာခြားနားချက် (p <0.05) ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက် pretreatment တစ်ဦးတည်းအဖော်ရှာဘို့ CPP ကထိခိုက်ခြင်းရှိမရှိကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ meth နှင့်မိတ်လိုက်နှင့်အတူ pretreated ယောက်ျားလိင်-တွဲအခန်းသုံးစွဲတိုးမြှင့်အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုမရှိခြင်းအားဖြင့်သက်သေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများအတွက်ဦးစားပေး, ဖွဲ့စည်းရန်ခဲ့ပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြ, ဆားနှင့်မိတ်လိုက်နဲ့ကုသခဲ့ယောက်ျားလိင်-တွဲအခန်းထဲကများအတွက်ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းရန်လုပ်ခဲ့တယ် (p = 0.003; သဖန်းသီး။ 8) ။ အတူတူအဲဒီဒေတာမိတ်လိုက်၏မရှိခြင်းအတွက် meth များအတွက်တိုးမြှင့်မက်လုံးပေး salience အတွက် meth နှင့်မိတ်လိုက်ရလဒ်များကိုအကြားအသင်းအဖွဲ့နှင့် meth နှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်တည်းအဖော်ရှာဘို့အကြံပြုပေမယ့်မူးယစ်ဆေး၏မရှိခြင်းအတွက်မိတ်လိုက်ဘို့အမက်လုံးပေး salience လျှော့ချ။
မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (စမ်းသပ်မှု 3) ရက်တွင်တစ်ပြိုင်တည်းပါမိတ်လိုက် (လိင်) နှင့် meth pretreatment ၏ဆိုးကျိုးများ။ လိင် + ဆား (Sal) သို့မဟုတ်လိင် + meth နှင့်အတူ pretreated ယောက်ျားအတွက် preference ရမှတ် (အချိန် 100 × + တွဲ unpaired အခန်းအချိန်အားဖြင့်အပိုင်းပိုင်းခွဲတွဲအခန်းထဲကသုံးစွဲ) ။ ဒေတာကို SEM ±ယုတ်အဖြစ်ပေးအပ်ကြသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, maladaptive သို့မဟုတ် compulsive လိင်-ရှာနှင့်မိတ်လိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် meth ဆုလာဘ်အပေါ်တိကျတဲ့အာရုံနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်ထပ်ခါတလဲလဲ meth ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ဤလေ့လာမှု၏အဓိကတွေ့ရှိချက် meth pretreatment လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏စကားရပ်ကိုထိခိုက်မခဲ့ပေမယ့် pretreatment အောက်ပါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူစေ၏။ အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပေါ်မှာဤအကျိုးသက်ရောက်မှု meth နှင့်မိတ်လိုက်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းအတွေ့အကြုံအပေါ်မှီခိုခဲ့သည်။ ထို့အပွငျတစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက် pretreatments meth ဆုလာဘ်တိုးမြှင့်ပေမယ့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်လျှော့ချ။ အတူတကွဤလေ့လာမှုများ meth နှင့်မိတ်လိုက်အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့ compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက်အပြောင်းအလဲများကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသို့မဟုတ်စကားရပ်များအတွက်အရေးပါကြောင်းပြသပါ။
meth pretreatment အခါမိတ်လိုက်နှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းပါ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတားစီးဖို့အေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းများ၏စွမ်းရည်အပေါ်ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိခဲ့သည်။ meth-pretreated အထီးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီသို့မဟုတ် LiCl-သွေးဆောင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုမနှစ်သက် Paradigm ကာလအတွင်းချို့ယွင်းသင်ယူမှုမဆိုသက်သေအထောက်အထားမပြခဲ့ပါဘူးကတည်းကဒီအကြိုးသကျရောအလွယ်တကူ, သင်ယူမှုသို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလိုငွေပြမှုအားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့မရနိုင်ပါ။ ထို့အပြင်ကြောင့် (meth ၏အနိမ့်ထိုး၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးကြွက်များတွင် meth မြင့်မားဆေးများမှနာတာရှည်ထိတွေ့အောက်ပါပုံမှန်အားဖြင့်မြင်ပြီသိမြင်မှုချို့ယွင်းခြင်းနှင့် neurotoxicity စေမဖြစ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်Walsh နှင့် Wagner, 1992; Friedman et al ။ , 1998; ချပ်မန်း et al ။ , 2001; Schröder et al ။ , 2003) နှင့်လူသားမြားသညျ (Ornstein et al ။ , 2000; ရှိမုနျကို et al ။ , 2002; Kalechstein et al ။ , 2003), (လက်ရှိလေ့လာမှုကဲ့သို့တူညီသောထိုးသုံးပြီး Single-နေ့က meth Bing Paradigm အရာဝတ္ထု-အသိအမှတ်ပြုမှုသင်ယူမှုအယှက်မပြုခဲ့ခြင်းနှင့် neurotoxicity မှုမပြုခဲ့အဖြစ်မာရှယ် et al ။ , 2007) ။ conditional လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ချို့ယွင်းဝယ်ယူသို့မဟုတ်စကားရပ်များအတွက်နောက်ထပ်အခြားရှင်းပြချက် LiCl များအတွက် sensitivity ကိုတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်သတ္တဝါများကိုယခင်က LiCl နှင့်အတူတွဲနေတဲ့အခန်းထဲကနေတဲ့အေးစက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ရယူ၏ညီတူညီမျှနိုင်စွမ်းရှိကြ၏။ ထို့ကွောငျ့အ meth-pretreated အထီးဝန်ထမ်းတွေရဲ့မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းသို့မဟုတ် LiCl သို့မဟုတ် LiCl-သွေးဆောင်ဖျားနာခြင်းမှ sensitivity ကိုလျှော့ချခဲ့ကြဘူး။ ဒါဟာလူ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အညီဖြစ်သည့်သင်ယူအနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ, (ရှိနေသော်လည်း meth pretreatment maladaptive သို့မဟုတ် compulsive လိင်ရှာစေပုံပေါ်Frosch et al ။ , 1996; Halkitis et al ။ , 2001; McKirnan et al ။ , 2001; Rawson et al ။ , 2002; Somlai et al ။ , 2003; အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006; Springer et al ။ , 2007).
ထိုမှတပါး, maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများလျှော့တားစီးပေါ် meth နှင့်မိတ်လိုက် pretreatment ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအလွယ်တကူမိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်ထားတဲ့တိုးမြှင့်ဆုလာဘ်များကရှင်းပြခဲ့သည်မဟုတ်။ ဆနျ့ကငျြ, တစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက်အတွေ့အကြုံကိုရရှိခဲ့ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များအတွက်မိတ်လိုက်နဲ့ဆက်စပ်ဆုလာဘ်-ရှာလျှော့ချခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်, အခြားရှင်းပြချက် maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါတွင်တစ်ပြိုင်တည်း meth နှင့်မိတ်လိုက် pretreatment ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်အဆိုပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓာတ်ခွဲခန်းကနေတစ်ဦးကမကြာသေးခင်က neuroanatomical လေ့လာမှု (meth လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေစေခြင်းငှါအဘယ်အရပ်သည်ဦးနှောက်ဧရိယာများဖော်ထုတ်Frohmader et al ။ , 2010c) ။ ဤတွင်, မိတ်လိုက်သို့မဟုတ် meth အားဖြင့်သွေးဆောင်အာရုံကြော activation ထိုကဲ့သို့သောအသီးသီး Fos သို့မဟုတ် MAPK ၏ phosphorylation အဖြစ်အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုအမှတ်အသားများကို အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်။ meth နှင့်မိတ်လိုက်သည့်နျူကလိယ accumbens, basolateral amygdala တို့နှင့် medial prefrontal cortex ၏ anterior cingulate ဧရိယာ (မှာရှိတဲ့အာရုံကြောဆဲလ် coactivatedFrohmader et al ။ , 2010c) နှင့် orbitofrontal cortex အတွက် (Frohmader နှင့် Coolen, 2010) ။ သူတို့စွဲလမ်းအပြုအမူတွေကို (ရန်အထောက်အကူပြုအဖြစ် prefrontal နှင့် orbitofrontal cortical အထူးစိတျဝငျစားဖြစ်ကြ၏Kalivas နှင့် Volkow, 2005; Kalivas et al ။ , 2005; Lasseter et al ။ , 2010; Winstanley et al ။ , 2010) ။ ထို့ပြင်ဤဦးနှောက်ဧရိယာ hypoactivity (inhibitory ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးနဲ့ဆက်စပ်အများအပြားစိတ်ရောဂါအခြေအနေများဆက်နွယ်နေကြောင်းသိရသည်Graybiel နှင့် Rauch, 2000; တေလာ et al ။ , 2002; လန်ဒန် et al ။ , 2005) ။ သက်သေအထောက်အထားဤလိုင်းများ meth အလှည့်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖျန်ဖြေကြောင့်ရေရှည်ကိုပြောင်းလဲစေဤတိုကျရိုကျ cortical လုပျဆောငျစေခြင်းငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီလိုင်းအတွက်, compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမြင့်မားဖြစ်ပွားမှုမူးယစ်ဆေးစွဲ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်မမှန် (အပါအဝင်အခြားစိတ်ရောဂါမမှန်နှင့်အတူထပ်ပြထားပြီBancroft, 2008) ။ ဒါ့အပြင်အဆိုပါ medial prefrontal နှင့် orbitofrontal cortical ၏မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ကမောက်ကမဖြစ်မှုလျှော့ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်တွေးဆကြသည် (ဘရူနှင့် Potenza, 2008; Fineberg et al ။ , 2010) နှင့်အများအပြားစွဲလေ့လာတိုးမြှင့်လိင်-ညွှန်ကြားအပြုအမူ (Jentsch နှင့်တေလာ, 1999; Bancroft, 2008) ။ ဤသဘောတူညီချက်မှာတော့အထီးကြွက်များတွင် medial prefrontal cortex ၏တွေ့ရှိရပါသည်လက်ရှိလေ့လာမှုများ (သုံးအေးစက်လိင်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ပါရာဒိုင်းအတွက် compulsive လိင်-ရှာကြံအပြုအမူအတွက်ရလဒ်Davis က et al ။ , 2010).
ယခင်သုတေသနချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ (အားဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် psychostimulants သို့မဟုတ် opiates ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးမူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင်ဆုလာဘ်ပိုကောင်းစေပါတယ်ကြောင်းပြသထားပါတယ်လက်တ, 1989; Shippenberg နှင့် Heidbreder, 1995; Shippenberg et al ။ , 1996) ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံ (ဃ-စိတ်ကြွဆေးဆုလာဘ်၏နောက်ဆက်တွဲာင်းစေသောအိုး et al ။ , 2010) ။ ထိုနေ့၏မှောင်မိုက်အဆင့်စဉ်အတွင်း meth ၏အနိမ့်ထိုး, တစ်ခုတည်းအေးစက်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း: လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ meth ၏ဆိုးကျိုးများနှင့် / သို့မဟုတ် meth ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကမူးယစ်ဆေး CPP ကဖြစ်ပေါ်ဖို့မျှော်လင့်ထားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းအခြေအနေများအောက်တွင်စမျးသပျခံခဲ့ရ နိမ့်ဆုံးချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ၏အချိန်များတွင် (ဝက်ဘ်က et al ။ , 2009a,b) ။ ထပ်ခါတလဲလဲ meth သို့မဟုတ်လက်ရှိလေ့လာမှုများတွင်အသုံးပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအဆိုပါမလွဲမသွေ regimen တိုးမြှင် meth CPP ကမဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ သို့သော်မိတ်လိုက်နှင့်အတူ meth pretreatment တစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက်အကြားကဒီအသင်းအဖွဲ့ meth ရှာဆုလာဘ်တစ်ခုတိုးမြှင့်စေညွှန်ပြ, meth ဆုလာဘ်မြှင့်တင်ရန်ပြုလေ၏။ ဤရလဒ်သည် (မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုများအတွက်မူလတန်း drive ကိုအဖြစ်တာ meth စဉ်အတွင်း indentifying လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးရှာကြံတိုးလာ meth လူ့အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာပေါ်လာSemple et al ။ , 2002; Schilder et al ။ , 2005; အစိမ်းရောင်နှင့် Halkitis, 2006) ။ ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏အစိတ်အပိုင်းများကို meth နှင့်မိတ်လိုက်အကြားအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အရေးပါနေသောလက်ရှိမသိရသေးဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိလေ့လာမှုမှာတော့အားလုံးယောက်ျားသုတ်ရည်လွှတ်မှ mated ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်တွေ့ရှိချက်များ (လူမှုရေး interaction က maladaptive လိင်-ရှာကြံအပြုအမူသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုFrohmader et al ။ , 2010a).
meth ဆုလာဘ်အပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းပါ meth နှင့်မိတ်လိုက် pretreatment ၏တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေခြင်းအလိုငှါအာရုံကြောအလွှာအတွက်နျူကလိယ accumbens နှင့် basolateral amygdala တို့ပါဝင်သည်။ အဆိုပါ accumbens အတွက် dendritic ကျောရိုးသိပ်သည်းဆနှင့် shape သုက်ပိုးပုံသဏ္ဌာန်ထဲမှာကြာရှည်အပြောင်းအလဲများကို (ထပ်ခါတလဲလဲမူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်မှုကနေဖြစ်ပေါ်ဘရောင်းနှင့် Kolb, 2001; ရော်ဘင်ဆင် et al ။ , 2002; လီ et al ။ , 2003; Robinson နဲ့ Kolb, 2004) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံက (Meisel နှင့် Mullins, 2006; အိုး et al ။ , 2010), နှင့်မူးယစ်ဆေး-သွေးဆောင် locomotor နှင့်ဆုလာဘ်ာင်းပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်တွေးဆကြသည် (ပီယပ်နှင့် Kalivas, 1997; Vanderschuren နှင့် Kalivas, 2000; လီ et al ။ , 2004) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala (မူးယစ်ဆေးလှုံ့ဆော်မှုနဲ့ဆက်စပ် conditional လှုံ့ဆော်မှုများ၏မှတ်ဉာဏ်အဘို့အရေးကြီးသည်ကျေးဇူးတော်နှင့် Rosenkranz, 2002; Laviolette နှင့်တော်ကကျေးဇူး, 2006) နှင့်ဆုလာဘ်ထိခိုက်စေအားဖြည့်ပါဝင်ပတ်သက် (Everitt et al ။ , 1999; Cardinal et al ။ , 2002; 2002, ကြည့်ရှုပါ) ။ အဆိုပါ basolateral amygdala ၏တွေ့ရှိရပါသည်သို့မဟုတ် inactivations ဝယ်ယူပိတ်ဆို့ (Whitelaw et al ။ , 1996) နှင့်စကားရပ် (Grimm နှင့်ကြည့်ရှု 2000) conditional-cued ကင်း reinstatement ၏။ ထိုမှတပါး, basolateral amygdala ကိုတွေ့ရှိရပါသည် (လျော့ချအစားအသောက်နှင့်အတူတွဲ conditional လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်တုံ့ပြန်မှုEveritt et al ။ , 1989) သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့် (Everitt et al ။ , 1989; Everitt, 1990) ကြွက်များဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် meth ၏အလားအလာဆုလာဘ် salience အတွက် accumbens နှင့် basolateral amygdala ရလဒ်အတွက် psychostimulant- နှင့်မိတ်လိုက်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအထိခိုက်မခံတပ်ရင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ပြသခဲ့ကြသည်။ D-စိတ်ကြွဆေး (10 မီလီဂရမ် / kg 1.5 နေ့စဉ်ဆေးထိုး) ၏မလွဲမသွေ pretreatments (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူလွယ်ကူချောမွေ့Fiorino နှင့် Phillips က, 1999a,bလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုရန်) အဖြစ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူ (Nocjar နှင့် Panksepp, 2002) ။ meth နှင့်အတူ pretreated အမျိုးသမီးကြွက်လေ့လာစရာများ (5 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်သုံးခုနေ့စဉ်ဆေးထိုး) တိုးမြှင့်လက်ခံအပြုအမူတွေအတွက်ရလဒ် (ကိုင်ဆောင်သူ et al ။ , 2010) ။ ဆနျ့ကငျြ, လက်ရှိလေ့လာမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် meth ကုသမှုတစ်ခုအထိခိုက်မခံတပ်ရင်း၏ဆိုးကျိုးများမပြခဲ့ပါဘူး။ ဒီကွာဟမှုများအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလားရှင်းလင်းချက်လက်ရှိလေ့လာမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအကဲဖြတ်နှင့်လိင်ကွဲပြားမှု (များတွင်အသုံးပြုအောက်ပိုင်းမူးယစ်ဆေးထိုးပါဝင်သည်Becker က Hu က, 2008).
meth စွဲ၏ကြွက်မော်ဒယ်များအပေါ်လေ့လာရေးမကြာသေးမီက (meth-သွေးဆောင်အပြုအမူချို့ယွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်မူးယစ်ဆေး Bing Paradigm အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့ကြBelcher et al ။ , 2008; Izquierdo et al ။ , 2010; O'Dell et al ။ , 2011), neuroplastic အပြောင်းအလဲများကို (နန် et al ။ , 2010), နှင့် neurotoxicity (Moszczynska et al ။ , 1998; Kuczenski et al ။ , 2007; ဂရေဟမ် et al ။ , 2008) ။ ဒီလေ့လာမှုတွေ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာလူ့ meth စွဲတှငျတှေ့သူတို့အားအနီးကပ်ကြွက်များတွင်ပလာစမာမူးယစ်ဆေးအဆင့်ဆင့်အောင်မြင်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဆနျ့ကငျြ, လက်ရှိလေ့လာမှုအနိမ့်ထိုး meth ၏တစ်ချိန်ကနေ့စဉ် passive အုပ်ချုပ်ရေးကြာရှည် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ရန်လုံလောက်သောခဲ့ကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့သည်။ တစ်ဦးက meth Bing ပါရာဒိုင်းလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းပြချက်များအတွက်အသုံးမခံခဲ့ရ: meth မြင့်မားဆေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအယှက် (Frohmader et al ။ , 2010a) နှင့်လူ့အသုံးပြုသူများကိုမကြာခဏ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့မူးယစ်ဆေးဝါးများတိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကိုသုံးပါSemple et al ။ , 2009) ။ လေ့လာမှုများ၏လက်ရှိစုံ၏အာရုံ unimpaired မိတ်လိုက်အပြုအမူနှင့်အတူတိရိစ္ဆာန်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များနှင့်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောမိတ်လိုက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ရလဒ် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပြောင်းလဲမူးယစ်ဆေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူတစ်ပြိုင်တည်းတစ်ကြိမ်အလွန်နိမ့်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုကြောင့်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့်ဦးနှောက်အတွက် meth ၏ Bing အဆင့်ဆင့် inducing အပေါ်မှီခိုနေကြသည်မဟုတ်နိုင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အတူတူ, လေ့လာမှုများ၏လက်ရှိ set ကိုမူးယစ်ဆေးများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်များအကြား compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များအပေါ် meth များ၏သက်ရောက်မှုများပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုဆီသို့အရေးပါသောခြေလှမ်းဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ထို့အပြင်ဤဒေတာကိုလူ့စွဲအစီရင်ခံသူတို့အား Parallel; ထို့ကြောင့်ဤယောက်ျားကြွက်မော်ဒယ်နောက်ထပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် meth သက်ရောက်မှု၏မော်လီကျူးများနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယန္တရားများဆန်းစစ်နှင့်အလားအလာအနာဂတ်မူးယစ်ဆေးစွဲကုထုံးအထောက်အကူပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သြဂုတ်လ 4, 2011 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူစက်တင်ဘာလ 8, 2011 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံစက်တင်ဘာလ 23, 2011 ။
ဤလုပ်ငန်းကို LMC မှကနျြးမာရေးသုတေသန Grant က RN 014705 ၏ကနေဒါ Institutes ကထောက်ခံခဲ့သည်
စာပေးစာယူ Lique အမ် Coolen, မစ်ရှီဂန်တက္ကသိုလ်, Molecular နှင့် Integrated ဇီဝကမ္မဗေဒဌာန, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ II ကို, ROOM တွင် 7732B, 1137 အီးကက်သရင်းလမ်း, အမ်း Arbore, MI 48109-5663 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မူပိုင်ခွင့်© 2011 စာရေးသူ 0270-6474 / 11 / 3116473-10 $ 15.00 / 0
(2002) သုတ်ရည်ထိ-ဆက်ပြောပါတယ်ဆန္ဒရှိအေးစက်နှင့်အထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုနှစ်ခုအဆင့်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သက်သေအထောက်အထား။ Physiol ပြုမူနေ 77: 425-435 ။
Berenfeld R ကို
(1990) ကိုအထီးကြွက်များတွင်သုတ်ရည်လွှတ်၏ဂုဏ်သတ္တိများအားဖြည့်: opioids နှင့် dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ပြုမူနေ neuroscience 104: 177-182 ။
Bancroft J ကို
"ထိန်းချုပ်ထဲက" ကြောင်း (2008) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်သီအိုရီအယူအဆချဉ်းကပ်နည်း။ စိတ်ရောဂါ Clin မြောက်အမေရိက Am 31: 593-601 ။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် (2008) လိင်ကွဲပြားမှု။ တပ်ဦး Neuroendocrinol 29: 36-47 ။
အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်အပေါ် (2008) သမ်ဖက်တမင်းလွှမ်းမိုးမှု: မြင့်တက်၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့် Single-နေ့ကဟောဒီမှာ regimen ။ Neuropsychopharmacology 33: 1453-1463 ။
Colussi-Mas J ကို,
Carati ကို C,
(2010) သမ်ဖက်တမင်း Self-အုပ်ချုပ်မှုနှင့်ကြွက်များတွင် monoamine နှင့် metabolite တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်ပေါ်အရေးပေါ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ဦးနှောက် Res 1317: 137-146 ။
ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်မမှန်၏ (2008) က neurobiology နှင့်မျိုးရိုးဗီဇ: မူးယစ်ဆေးစွဲလမ်းမှဆက်ဆံရေး။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး Pharmacol 75: 63-75 ။
Kolb B ကို
(2001) နီကိုတင်းာင်းနျူကလီးယပ် accumbens နှင့် cingulate cortex အတွက် dendritic အရှည်နှင့်ကျောရိုးသိပ်သည်းဆတိုးပွားစေပါသည်။ ဦးနှောက် Res 899: 94-100 ။
စိတ်ကြွဆေး၏ neurotoxic regimen ပြီးနောက် Basal ganglia function ကိုအတွက် (2001) Long-term အပြောင်းအလဲများကို။ J ကို Pharmacol Exp Ther 296: 520-527 ။
(1989) အရက်နှင့်လူ့လိင်: ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်ပေါင်းစည်းမှု။ Psychol Bull 105: 374-386 ။
Davis က JF,
လာကြောင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ် M က,
အဆိုပါ medial prefrontal cortex ၏ (2010) ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အထီးကြွက်များတွင် maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 67: 1199-1204 ။
လှုံ့ဆော်မှု-ဆုလာဘ်အသင်းအဖွဲ့များအတွက် amygdala နှင့် ventral striatum အကြား (1989) ဆက်သွယ်မှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများ။ neuroscience 30: 63-75 ။
Robledo P ကို,
စွဲလမ်းအတွက် (1999) Associative လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် amygdala-ventral striatal subsystem ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဆုချ။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ 877: 412-438 ။
Menzies L ကို,
တစ်ဦးဇာတ်ကြောင်းပြန်လည်သုံးသပ်: (2010) တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များမှသည် endophenotypes မှ compulsive နှင့်ထကြွလွယ်သောအပြုအမူ, စကားတွေ။ Neuropsychopharmacology 35: 591-604 ။
D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းအောက်ပါအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1999a) နည်းပြ။ Psychopharmacology 142: 200-208 ။
D-စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင်အပြုအမူာင်းပြီးနောက်လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူများ (1999b) နည်းပြများနှင့်အထီးကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့် dopamine efflux ။ J ကို neuroscience 19: 456-463 ။
Fisher က DG,
Reynolds က GL,
(2011) သမ်ဖက်တမင်းနှင့် Viagra အသုံးပြုမှု: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုမှကြားဆက်ဆံရေး။ Arch လိင်ပြုမူနေ 40: 273-279 ။
Friedman SD က,
(1998) Long-term monoamine ကွယ်ပျောက်သွားစေ, differential ကိုပြန်လည်နာလန်ထူများနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် neurotoxicity အောက်ပါသိမ်မွေ့အပြုအမူချို့ယွင်း။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 61: 35-44 ။
maladaptive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်နောက်ခံအာရုံကြောအလွှာအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ (2010) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Soc neuroscience Abstr 36: 595-18 ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုနှင့်အထီးကြွက်များတွင်အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအပြုအမူအပေါ်စိတ်ကြွဆေး၏ (2010a) အကျိုးသက်ရောက်မှု။ Psychopharmacology (Berl) 212: 93-104 ။
(2010b) အပျော်အပါးရောစပ်: လူသားများနှင့်တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်လိင်အပြုအမူအပေါ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏သက်ရောက်မှုများပြန်လည်သုံးသပ်။ Horm ပြုမူနေ 58: 149-162 ။
(2010c) သမ်ဖက်တမင်းအထီးကြွက်များတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူထိန်းညှိအာရုံခံ၏ subpopulations အပေါ်ပြုမူ။ neuroscience 166: 771-784 ။
Shoptaw S က,
လိန်း W က
လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးအထီးစိတ်ကြွဆေးအချိုးဖောက်ဆုံးအကြား (1996) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ HIV ပိုးအန္တရာယ်။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 13: 483-486 ။
basolateral amygdala အာရုံခံ၏အခွအေနေတုံ့ပြန်မှုများ (2002) စည်းမျဉ်းဥပဒေ။ Physiol ပြုမူနေ 77: 489-493 ။
Noailles PA ဆိုပြီး,
(2008) Single-နေ့ကမျိုးစုံ-ထိုးစိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်အရှိန်မြင့်ထိုး-မူးရူး regimen ၏ neurochemical အကျိုးဆက်များ Differential ။ J ကို Neurochem 105: 1873-1885 ။
obsessive-compulsive ရောဂါတစ် neurobiology ခါနီး (2000) ။ အာရုံခံဆဲလျ 28: 343-347 ။
အစိမ်းရောင် AI အ,
ရွေးကောက်ပွဲဆှဖှေဲ့: တစ်ခုမြို့ပြလိင်တူချစ်သူယဉ်ကျေးမှုအတွက် (2006) Crystal စိတ်ကြွဆေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး။ အစွန်းရောက်ကျန်းမာရေးလိင် 8: 317-333 ။
relapse ၏တိရစ္ဆာန်မော်ဒယ်အတွက်မူလတန်းနှင့်အလယ်တန်းဆုလာဘ်-သက်ဆိုင်ရာ limbic အရေးပါ၏ (2000) Dissociation ။ Neuropsychopharmacology 22: 473-479 ။
(2001) တစ်ဦးကနှစ်ဆကပ်ရောဂါ: လိင်တူချစ်သူလူတို့တွင် HIV ပိုးကူးစက်ခြင်းမှစပ်လျဉ်းကြည်လင်စိတ်ကြွဆေးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ J ကို Homosex 41: 17-35 ။
Blutstein T က,
(2010) သမ်ဖက်တမင်းအမျိုးသမီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် medial amygdala နှင့် hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယထဲမှာအာရုံခံ activation ပိုကောင်းစေပါတယ်။ Psychoneuroendocrinology 35: 197-208 ။
(2002) ဟော်မုန်းကဦးနှောက်နှင့်အပြုအမူ, အမျိုးသားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ, eds Pfaff DW, အာနိုးက AP, Etgen လေး, Fahrbach SE, Rubin က RT ကို (Elsevier သိပ္ပံ, San Diego မှ), စစ 1-138 ၌တည်၏။
Scott L ကို,
Cazares VA သို့,
Malvaez M က,
ဝူ T က,
(2010) ပြောင်းပြန်-တိကျတဲ့သင်ယူမှုချို့ယွင်းကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေးတစ်မူးရူး regimen ပြီးနောက်: striatal dopamine ၏ဖြစ်နိုင်သောပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Neuropsychopharmacology 35: 505-514 ။
အစိမ်းရောင် M က
(2003) သမ်ဖက်တမင်းမှီခို abstinence ၏ကနဦးအဆင့်များတွင် neurocognitive ချို့ယွင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ J ကို Neuropsychiatry Clin neuroscience 15: 215-220 ။
Volkow N ကို,
Seaman J ကို
စွဲလမ်းအတွက် (2005) စီမံထားခြင်းမရှိသောလှုံ့ဆော်မှု: prefrontal-accumbens အချိုမှုဂီယာအတွက်ရောဂါဗေဒ။ အာရုံခံဆဲလျ 45: 647-650 ။
Masliah E ကို
(2007) ကိုကြွက်များတွင် neocortex နှင့် limbic စနစ်၏ယိုယွင်းအတွက်ထိုး-မျိုးစုံမူးရူးစိတ်ကြွဆေးထိတွေ့မှုရလဒ်များကိုမြင့်တက်။ Exp Neurol 207: 42-51 ။
Xie X ကို,
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏အပြုအမူမှ neuroscience အတွက် (2010), မူးယစ်ဆေး relapse ၏တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များအတွက်ရှာကြံမူးယစ်ဆေးဝါး၏ Prefrontal cortical စည်းမျဉ်း, eds ကိုယ်ပိုင် DW, Staley Gottschalk JK (Springer ဘာလင်), စစ 101-117 ။
(2006) Cannabinoids basolateral amygdala သွင်းအားစုများမှတဆင့် medial prefrontal cortex ၏အာရုံခံအတွက်စိတ်ခံစားမှုသင်ယူမှု plasticity potentiate ။ J ကို neuroscience 26: 6458-6468 ။
တစ်ဝတ္ထုအနံ့နှင့်အတူပံ့ပိုးကူညီခြင်း: ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်နာမကျန်းသုံးပြီးအထီးကြွက် copulatory အပြုအမူများ (1987) ချုပ်ရာ။ ပြုမူနေ neuroscience 101: 289-291 ။
(1989) ထပ်ခါတစ်လဲလဲထိတွေ့မှုစိတ်ကြွဆေး, မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအရှိန်အဟုန်မြင့်ထက်လျော့။ Psychopharmacology (Berl) 98: 357-362 ။
လီ Y ကို,
Kolb B က,
Berman သည် SM,
Voytek B က,
Monterosso J ကို,
မကြာသေးမီက abstinent စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများ (2005) ဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်ချို့ယွင်းသတိဝီရိယ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58: 770-778 ။
(2007) သမ်ဖက်တမင်း-သွေးဆောင်အာရုံကြောနှင့်ကြွက်များတွင်သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲများကို။ စှဲမွဲမှု 102: 61-69 ။
McKirnan DJ သမား,
Vanable PA ဆိုပြီး,
(2001) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ "ထွက်ပေါက်" ၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်-ပါဝင်ပတ်သက်လိင်တူချစ်သူများနှင့်ရိုးရိုးလူတို့တွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှု 13: 137-154 ။
Turenne S က,
(1998) ကိုဓါတ်တိုး glutathione ၏ Rat striatal အဆင့်ဆင့်စိတ်ကြွဆေး၏မူးရူးအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါလျော့နည်းသွားနေကြသည်။ neuroscience လက်တ 255: 49-52 ။
Nocjar ကို C,
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် variable တွေကိုနှင့်အတူအပြန်အလှန်: (2002) နာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းစိတ်ကြွဆေး pretreatment drug- နှင့်သဘာ-အကျိုးသည်အနာဂတ်အစာစားချင်စိတ်အပြုအမူပိုကောင်းစေပါတယ်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 128: 189-203 ။
လူမှုရေးအနံ့-based တာဝန်ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ် (2011) စိတ်ကြွဆေး၏တစ်ဦးက neurotoxic regimen အသစ်အဆန်းအသိအမှတ်ပြုမှုချို့ယွင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res 216: 396-401 ။
နာတာရှည်စိတ်ကြွဆေးနှင့်ဘိန်းဖြူချိုးဖောက်သိမြင်မှုကမောက်ကမဖြစ်မှု၏ (2000) Profiles ။ Neuropsychopharmacology 23: 113-126 ။
အများပြည်သူနှင့်စီးပွားဖြစ်လိင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကြာခဏအဘယ်သူသည် HIV ပိုးကိုလူတို့ (2002) လိင်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး-သုံးပြီးအလေ့အကျင့်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု 14: 815-826 ။
ပီတာ RH အ
(1983) အထီးကြွက်များတွင် copulatory အပြုအမူတွေကိုလုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသင်ယူ။ ပြုမူနေ neuroscience 97: 140-145 ။
Peugh J ကို,
Belenko S က
(2001) အရက်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကို: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်။ J ကို Psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါး 33: 223-232 ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ၏ (2009) Pathways ။ J ကိုလိင် Med 6: 1506-1533 ။
သဘာဝကဆုလာဘ်များနှင့်နောက်ဆက်တွဲဆုလာဘ် abstinence အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ mesolimbic စနစ် (2010) Neuroplasticity ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 67: 872-879 ။
Saitz R ကို,
ဆောင်းရာသီ M က,
အရက်, ဘိန်းဖြူနှင့်ကိုကင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့် detoxification လူနာအကြားမြင့်မားတဲ့စွန့်စားမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြား (2007) အစည်းအရုံးများ။ နံနက် J ကိုမူးယစ်ဆေးအရက်အလွဲသုံးမှု 33: 169-178 ။
Domier က CP,
Reiber ကို C
(2002) မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု: မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားနှင့်ကျား, မများ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 22: 103-108 ။
အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ် (2004) ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ plasticity ။ Neuropharmacology 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 33-46 ။
(2002) နေရာအနှံ့ပေမယ် dendritic နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ကျောရိုး, hippocampus နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်၏ neocortex အပေါ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်မော်ဖင်းအကိုက်နှိုင်းယှဉ် experimenter- ၏ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဆိုးကျိုးများ။ synapses 46: 271-279 ။
Sanchez J ကို,
Comerford M က,
ဆေးထိုးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုမရှိသမိုင်းရှိသည်သောဘိန်းဖြူခြေရာခံခြင်းဂရုစိုက်အကြား (2002) မြင့်မားသောအန္တရာယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ: HIV ပိုးအန္တရာယ်လျော့ချရေးတို့အတွက်ဂယက်ရိုက်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု 14: 391-398 ။
Miller က ML,
Hogg သည် RS
(2005) Crystal စိတ်ကြွဆေးနှင့် ecstasy ငယ်ရွယ်လိင်တူချစ်သူလူတို့တွင်လုံခြုံလိင်နှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြား။ J ကိုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနိုင်သလား 96: 340-343 ။
Schröder N ကို,
(2003) Neurotoxic စိတ်ကြွဆေး regimen ပြင်းထန်စွာကြွက်များတွင်အသိအမှတ်ပြုမှုမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်း။ synapses 49: 89-96 ။
မူးယစ်ဆေး-ရှာကြံအပြုအမူမှ conditional-cued relapse ၏ (2002) ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောအလွှာဟာ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ 71: 517-529 ။
လိင်တူဆက်ဆံသူကို HIV ပိုးလူတို့တွင်စိတ်ကြွဆေးသုံးစွဲခြင်းနှင့်ဆက်နွယ် (2002) စိတ်ရင်း။ J ကို Subst အလွဲသုံးမှုရယူထားသော 22: 149-156 ။
Strathdee လုပ် SA,
Zians J ကို,
လိင်တူဆက်ဆံသူကို HIV ပိုးယောက်ျားတစ်နမူနာများတွင်စိတ်ကြွဆေးများနှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးပူးတွဲအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ဆက်စပ် (2009) လိင်အန္တရာယ်အပြုအမူ။ နံနက် J ကိုစွဲ 18: 65-72 ။
Heidbreder ကို C
pharmacological နှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ: ကိုကင်းများ၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ (1995) အသိ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 273: 808-815 ။
Heidbreder ကို C,
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ယာယီဝိသေသလက္ခဏာများ: မော်ဖင်းအကိုက်၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုမှ (1996) အသိ။ EUR J ကို Pharmacol 299: 33-39 ။
sim T က,
ရစ်ချတ်ဆန် K သည်,
လက်ရှိစိတ်ကြွဆေးနှင့်ကိုကင်းအချိုးဖောက်ဆုံး (2002) သိမှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို။ J ကိုစွဲ dis 21: 61-74 ။
Ksobiech K သည်,
ဆေးထိုးဆေးသုံးပြီးအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းနမူနာများတွင် HIV ပိုးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူများ (2003) ခန့်မှန်း။ AIDS ရောဂါပြုမူနေ 7: 383-393 ။
Shegog R ကို,
White က DL,
US မှာ (2007) သမ်ဖက်တမင်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအထက်တန်းကျောင်းသားများအတွက်: တစ်အမျိုးသားရေးအန္တရာယ်အပြုအမူစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်။ prev သိပ္ပံ 8: 103-113 ။
(2002) schizophrenia အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏တစ်ဦးကအလုပ်လုပ်တဲ့ခန္ဓာဗေဒလေ့လာမှု။ Schizophr Res 58: 159-172 ။
preclinical လေ့လာမှုများ၏အရေးပါသောပြန်လည်သုံးသပ်: dopaminergic နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအကဲဆတ်ခြင်း induction နှင့်စကားရပ်ထဲမှာ glutamatergic ဂီယာအတွက် (2000) ALTER ။ Psychopharmacology (Berl) 151: 99-120 ။
(1992) မော်တော်ချို့ယွင်းကြွက်များတွင်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် neurotoxicity ပြီးနောက်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 263: 617-626 ။
အဆိုပါခန္ဓာကိုယ်ထဲက Circadian နှင့်ဆုလာဘ်စနစ်များအကြား (2009a) Bidirectional interaction က: ကန့်သတ်အစားအစာ access ကိုထူးခြားတဲ့ zeitgeber ပါသလဲ EUR J ကို neuroscience 30: 1739-1748 ။
သဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်အတွက် (2009b) Diurnal မူကွဲ, mesolimbic tyrosine hydroxylase, နှင့်အထီးကြွက်များတွင်နာရီဗီဇစကားရပ်။ J ကို Biol Rhythm 24: 465-476 ။
အဆိုပါ basolateral amygdala ၏ (1996) Excitotoxic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အားဖြည့်တဲ့ဒုတိယယူမှုကိုအချိန်ဇယားအောက်တွင်ကင်း-ရှာကြံအပြုအမူများဝယ်ယူအယှက်။ Psychopharmacology 127: 213-224 ။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များကို အသုံးပြု. လေ့လာမှုများကနေ Impulse နှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုတို့အကြားဆက်ဆံရေးသို့ (2010) ထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း။ အရက် Clin Exp Res 34: 1306-1318 ။
အဆိုပါဂျာနယ်၌ဤအပတ်: အဆိုပါဂျာနယ်၌ဤအပတ် အဆိုပါအာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,9နိုဝင်ဘာလ 2011, 31 (45): ကိုယ့်